wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » January » 2
//January 2, 2018
Guddoomiyaha Maxkamada ciidamada aabihiis oo goor dhow lagu diley Muqdisho
Waxaa goordhow lagu diley gurigiisa oo ku yiil degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho Cali Nuur oo ahaa aabaha guddoomiyaha Maxkamada darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida Col. Xasan Cali Nuur Shuute. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Cali Nuur lagu dhex diley gurigiisa oo...
Akhriso: Warsaxaafadeed lagu amray in ay isdiiwaan geliyaan Masaajidyada iyo Xarumaha lagu barto diinta
Akhriso: C/raxmaan C/shakuur oo sheegay in aysan jirin cid dacwad sharci ah ku haysata
Wasiirka Arrimaha Gudaha Juxa oo kulamo la qaatay maamulka iyo waxgaradka Beled Xaawo
Wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa , Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Senataro, Xildhibaano iyo Masuuliyiin kale ayaa xalay kulamo la qaatay mas’uuliyiinta iyo shacabka Beledxaawo. Kulamadan ayaa looga hadlay xiisad ka taagan...
, By Mogadishu
Hay’ada Socdalka iyo Jinsiyadaha oo xafiis ka furatay magaalada Beled Xaawo
Hay’adda Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa waxa ay si rasmi ah Xarun uga furatay Magaalada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo. Xafiiskaan ayaa waxaa daahfuray Agaasimaha Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale oo uu wehliyo Wasiirka Arrimaha...
Madaxweyne Trump oo Twitterkii ugu horeeyay 2018 ku cambaareeyay Pakistan
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dawladda Pakistan in ay khayaanayso Maraykanka iyadoo balaayiin doolar oo gargaar ah la siinayo. Twitterkiisii u horreeyay ee uu sannadkan cusub soo dhigo ayuu Pakistan ku eedeeyay in uu gabaad siinayo argagixisada. Pakistan...
Madaxweyne Farmaajo oo toddobaadka dambe booqasho ku tegeya Puntland
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in toddobaadka soo socda uu booqdo magaalada Garowe ee Dowlad goboledka Puntlan. Booqashada Madaxweynaha ee Puntland oo hore dib u dhac uu ugu yimid ayaa lagu sheegay inay tahay ka qeybgalida...
50 Ardey oo Master Degree ka Qalinjebisay iyo Xarun Jaamacadeed oo la Daahfuray (Sawiro)
Munaasabad Qalin jebin Master Degree ah oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Ganacsato iyo Culumaa’uddiin ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho. 50 ardey ayaa dhameysatay Master Degree Qeybaha kala ah International Business iyo Master of...